ထိုင်းကိုရောက်ပြီး ပထမဆုံး ချက်ဖြစ်တဲ့ဟင်းတခွက်ပါဗျ။ ထိုင်းအစားအစာတွေနဲ့ အဆင်ပြေသော်လည်း
မြန်မာဈေးဘက်ရောက်တော့ချဉ်ပေါင်ရွက်နဲ့မျှစ်တွေ့တာနဲ့ ဝယ်ပြီး မြန်မာပြည်အလွမ်းပြေ ကြော်စားဖြစ်ပါ
ချဉ်ပေါင်ရွက်နှစ်စည်းကို မျှစ်တထုပ်နဲ့ကြော်တာ သုံးရက်လောက်စားလိုက်ရတယ်။ အဆောင်အောက်ထပ်
ထမင်းဆိုင်က ထမင်းဖြူဝယ်ပြီး ချဉ်ပေါင်ကြော်နဲ့ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ ကိုယ့်အခန်းမှာပဲ စားဖြစ်တယ်။ အခန်းမှာ
တခါတလေ ချက်ဖို့ ဒယ်အိုးနီတစ်လုံး ဝယ်ထားလိုက်တယ် အခန်းဖော်ကိုလည်း နားလည်အောင်ပြောပြ
မြန်မာအစားအစာလွမ်းတဲ့အခါ ဟင်းချိုတို့ ခေါက်ဆွဲပြုတ်တို့ သောက်ချင်တဲ့အခါ လွယ်အောင်လို့ဝယ်တာ
မင်းလည်း လိုအပ်ရင်သုံးလို့ရတယ်လို့တခါတည်း ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတယ်။
ဈေးဆိုင်ဘက်ရောက်တဲ့အခါ ဟင်းချက်စရာတွေမြင်ရင် ချက်ပြုတ်ချင်စိတ်ထထလာလို့ မနည်းထိန်းရတယ်။
အိမ်ကအမေကတော့ အခုလိုဟင်းလေးတွေ ချက်စားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ၀မ်းတွေသာလို့ ချဉ်ပေါင်ရွက်ရှိတာပေါ့ ၀ယ်လို့ရတယ်လားနဲ့ ဖုန်းပြောဖြစ်ရင် ဒီကအကြောင်းတွေ အမေ့ကို ပြောပြရတာ မဟုတ်ရင်စိတ်ပူနေမှာစိုးလို့ အသက်သုံးဆယ်ကျော် တက္ကသိုလ်ဆရာဖြစ်နေပြီ အမေကတော့ အခုထိ ကလေးတစ်ယောက်လိုပဲ စိတ်ပူနေတုန်း မိဘမေတ္တာများ သားသမီးအပေါ်ဆို အမြဲကို အစွန်းထွက်နေ တတ်တာ ကြာလေပိုသိလာရလေပါပဲ။
စာရေးသူ ရှညောသား at Thursday, December 28, 2017 1 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဖက်သီး နဲ့ ငါးခြောက်ဟင်း
ဖက်ပွင့်ဖက်သီးတွေပေါ်ချိန်တုန်းက ချက်စားဖြစ်တဲ့ဟင်းတခွက်ပါ။ ဖက်ပွင့်ဖက်သီးလို့ကျနော်တို့ဆီမှာခေါ်တဲ့
သို့မဟုတ် ပင်စိမ်းရွက်လေးပါးပါးအုပ်ပြီးထမင်းပူပူနဲ့ရေနွေးလေးတွဲ၍သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဖက်သီးကအနည်းငယ်ခါးတဲ့အရသာလေးရှိလို့ ငါးခြောက်အငံဓာတ်လေး
ချက်စားချင်သော်လည်းကျောင်းတွင်းဆောင်မှာနေရတာရယ်အခန်းဖော်ကိုအားနာတာရယ်ကြောင့်ကျောင်းကရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေမှာလည်း တနေ့တမျိုးမရိုးရအောင်ဝယ်စားလိုက်တော့တယ်။ချက်ပြုတ်ချိန်ကစာကြည့်ဖို့အတွက်ပိုလာတာပေါ့ဗျာ။
စာရေးသူ ရှညောသား at Thursday, September 07, 20172comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ကျောင်းပိတ်ရက်ရွာပြန်တုန်း မရောက်တာကြာတဲ့ တောင်ရိုးပေါ်ကို ရွှေကူသန် (လောက်သေရွက်)ခူးရင်း မှိုရှာရင်း
တောင်ရိုးပေါ်ရောက်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်ရွာပြန်တဲ့အချိန်ကမှို တုန်းတဲ့အချိန်မို့ မျိုးစုံအောင်မရတော့ဘူး။ လောက်သေရွက်
ခူးရင်း မရမက မှိုရှာတာ အဖော်လိုက်ပေးတဲ့အစ်မက တောကျွမ်းတော့ မှိုတခါချက်လောက်ရသေးတယ်။
လောက်သေရွက်ကတော့အများကြီးပဲ တောထူလို့ ခြင်တွေကိုက်တာနဲ့ မြန်မြန်ပြန်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ရောက်တော့
ညနေစာအတွက် လေးလေးက မှို ကို ပင်စိမ်းအုပ်ပြီးငရုတ်သီးစပ်ကြော်ပေးတယ်။ မစားရတာကြာတော့စားလို့ကောင်း
ရွာအနောက်ဘက်က ပြန်ဆည်ထားတဲ့ ကန် နဲ့ တိမ်ဖုံးနေတဲ့ ပုပ္ပားတောင်
မှို ရှာရင်း ဓာတ်ပုံရိုက်
အဲ့ဒီကျောက်တုံးတွေကြားထဲ တောင်ခြေကနေပြီး တက်လာတာ မှို လိုချင်တဲ့ ဇောနဲ့ မောလို့ မောမှန်းမသိဘူး
အခုလို မှို လေးတွေ့တော့ အမောပြေရော :) အနီရောင်ကို မယ်သီလ မှို လို့ ခေါ်တယ်
မှို အ၀ါကိုတော့ ကိုရင် မှို တဲ့ သူက စားလို့ ပိုပြီး ချို တယ် ည တုန်းကမှပေါက်တာဆိုတော့ လတ်ဆတ်နေတာပဲ
ဟော့ဒီမှာ နောက်တပွင့် ကျနော်က မှို နီလေးတွေပဲတွေ့တယ်
ရွှေကူသန်ရွက် ခေါ် လောက်သေရွက် လဘက်ခြောက်လုပ်သောက်တာ ဌာနရောက်တော့
ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ ဆရာဆရာမတွေကို ပေးသောက်လိုက်တယ် :)tr
မောင်နှမ နှစ်ယောက်ခူးတာ အရွက်တွေအများကြီးရခဲ့တယ် အိမ်ရောက်တော့ အဖွားက အရွက်ခြွေတာ ခွဲ တောင်း တလုံး
အပြည့် ဓာတုဗေဒသမားဆိုတော့ နေပူမလှန်းဘဲ အရိပ်ထဲမှာပဲအခြောက်ခံပြီး ကျောင်းကိုသယ်ခဲ့တယ်။
ကျနော်ဘလော့ခ် ပြန်ရေးလို့အဆင်ပြေပြီမို့ ပို့စ်အသစ်လေးတွေမကြာမကြာပြန်တင်နိုင်တော့မယ်ဗျ။ချစ်စွာသောညီအစ်ကို
စာရေးသူ ရှညောသား at Thursday, August 31, 20170comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ပျော်ရမှာ မနေရ တော်ရာမှာနေရ ဆိုတဲ့စကားက ကျနော့်အတွက်အမှန်ပဲဖြစ်နေသလားမပြောတတ်ပါဘူး။
ဆန်ကာတင် ၇ ယောက်စာရင်းမှာကိုယ့်နာမည်ပါလာတော့ဝမ်းသာရပြန်တယ်။
ပြောရှာတယ်။အင်းပါအမေရယ် အမေရိကန်တို့ အင်္ဂလန်တို့လိုနိုင်ငံမျိုးဆိုရင်တော့သွားချင်သေးလို့ရယ်စရာစရင်း
ဒီလိုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုတဆင့်ချင်းသည်းခံကျော်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံ Prince of Songkla University
မကြည်ကြည်ပြောတဲ့ ငါ့မောင်ကပညာနဲ့ကမ္ဘာပတ်ရမယ်လက္ခဏာ ဆိုတဲ့စကားကိုသာပြန်ကြားယောင်ရင်း သူ့စကား
စာရေးသူ ရှညောသား at Monday, August 21, 20170comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ရွှေညာသားလည်းအိမ်သော့ပိတ်ပြီး ပျောက်နေတာ တော်တော်ကြာသွားပြီ
မရောက်ဖြစ်ပေမဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမအားလုံးကို အမြဲသတိရလျက်ပါ
အဓိကမလာဖြစ်တာက ဆိုးရွားလှသော အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်ပါ
မကြာခင်မှာ ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လာနိုင်တော့မယ်ဗျ ပြန်လာဖို့နောက်ထပ် အခွင့်အရေးတခု
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, July 22, 20173comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook